आदित्यमान श्रेष्ठ - | Nagarik News - Nepal Republic Media
आदित्यमान श्रेष्ठका लेखहरु :
नेपालको २०६२/६३ सालको परिवर्तनलाई ठूलो परिवर्तनका रूपमा लिइन्छ । हुन पनि ठूलै थियो । तर कालान्तरमा मानिस त्यसबाट विक्षिप्त हुँदैछन् ।
आदित्यमान श्रेष्ठ १७ भाद्र २०७७ बुधबार ३ मिनेट पाठ
आदित्यमान श्रेष्ठ ३० श्रावण २०७७ शुक्रबार ६ मिनेट पाठ
विश्व परिवर्तनको दोसाँधमा
नयाँ शक्ति र हतियारको बलबाट पश्चिमी मुलुकहरूले संसारमा राज गर्ने, आर्थिक शोषण गर्ने र संसारको मालिक बत्रे कार्य गरे।
आदित्यमान श्रेष्ठ ३० जेष्ठ २०७७ शुक्रबार ५ मिनेट पाठ
कोरोनाभाइरसले मानिसको धेरै नाश गरेको छ। तर एउटा कुरामा यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ। त्यो हो मानिस आआफ्ना देशमा बाँडिएर बसेता पनि मानिस जाति एउटै हो। हुन त भूमण्डलीकरणले विश्वलाई एउटै गाँठोमा बाँधिरहेको छ तर आजसम्म मानिस आआफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा लागेका थिए।
आदित्यमान श्रेष्ठ १० जेष्ठ २०७७ शनिबार ४ मिनेट पाठ
काल्पनिक संसार वास्तविकतामा?
सन् १९८९ को कुरा हो। बैंककमा एउटा छलफल चल्दै थियो। के विश्वव्यापीकरणले विकासशील देशहरूलाई फाइदा हुँदैछ ?त्यो समयमा विश्वव्यापीकरणको दौड चल्दै थियो।
आदित्यमान श्रेष्ठ २७ चैत्र २०७६ बिहीबार १० मिनेट पाठ
संघीयताले फुटाएको समाज
रिडीका विभिन्न भाग विभिन्न जिल्लामा परे तापनि पहिले–पहिले यहाँका बासिन्दा एकजुट भएर काम गर्थे। जुन–जुन जिल्लामा परे पनि सबैले आफूलाई रिडीवासी ठान्थे। तर जुन बेलादेखि संघीयता लागू भयो त्यस बेलादेखि यहाँ फुट पैदा भयो।
आदित्यमान श्रेष्ठ २० माघ २०७६ सोमबार ९ मिनेट पाठ
आदित्यमान श्रेष्ठ २५ पुस २०७६ शुक्रबार १० मिनेट पाठ
नेपाली भाग्यको ढोका
केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको भाग्य जागेको र ज्ञानेन्द्र शाहको भाग्य हराएकामा नेपाली त्यति धेरै महत्व दिँदैनन्। उनीहरू यसलाई समयको एउटा चक्रमात्र मान्छन्।
आदित्यमान श्रेष्ठ १० पुस २०७६ बिहीबार ११ मिनेट पाठ
नेपाललाई चाहिने के हो ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता हुँदा जनताको जनवाद अंगाल्ने अठोट गरिएको थियो। यसको मतलब हुन्छ बहुदल नमान्ने, एउटै दलको शासन सत्ता कायम गर्ने, प्रजातान्त्रिक वाक् र प्रेस स्वतन्त्रता नदिने र चीनको जस्तो राजनीतिक व्यवस्था कायम गर्ने।
आदित्यमान श्रेष्ठ २० कार्तिक २०७६ बुधबार १३ मिनेट पाठ
पुराना सबै प्रतिगामी ?
नेपाल र नेपालीसित गौरव गर्ने जति पुराना निर्माण र संस्कार छन्, उति आधुनिककालका छैनन्। त्यसो भएपछि कसरी पुराना कुरा प्रतिगामी हुने र नयाँचाहिँ सबै अग्रगामी हुने ?
आदित्यमान श्रेष्ठ २ आश्विन २०७६ बिहीबार ११ मिनेट पाठ
हल्ला साँचो हुन लागेको हो ?
यही नागरिक दैनिकमा गत जेठ २९ गते प्रकाशित ‘राजा किन चाहियो ?’ लेखका विषयमा एउटा पाठकले मलाई बाटामा रोके। र, सोधे– ‘तपाईंलाई अहिले आएर राजा किन चाहियो ? यति धेरै परिवर्तन भइसक्यो। अब राजाले के गर्न सक्छ ?’ हुन त मैले राजसंस्था किन चाहियो भनेर त्यस लेखमै आफ्नो तर्क पेस गरिसकेको थिएँ। तर एउटा पाठकको सीधा प्रश्नको उत्तर नदिई हिँड्नु ठीक लागेन। मैले भनें, ‘राजा मलाई चाहिएको होइन। हाम्रो देशलाई चाहिएको हो।’ मेरा एकजना साथीले करिब एक दशकअगाडि यो देश नरहने भयो, अरूको गुलाम हुने भयो, त्यसकारण म अमेरिकामा बसाइँ सरेको छु भनेका थिए। उनले १० वर्षभित्र यो काम हुन्छ भनेर तोकेका पनि थिए।
आदित्यमान श्रेष्ठ १७ भाद्र २०७६ मंगलबार १२ मिनेट पाठ
यो के भनेको ?
जनताको जनवाद कि जनताको बहुदलीय जनवाद ? जज कि जबज ? यो विवादले सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई ग्रस्त पारेको छ। यो आन्तरिक विषय हो कि सार्वजनिक ? यसले नेपाल राज्यको बागडोर सम्हालेको पार्टीलाई गाँजेको देखिन्छ। तर नेपाली जनताले यसमा ठूलो चासो लिएको देखिँदैन। बुझेर चुप लागेका हुन् कि नबुझेर ? मैले कुनै भेउ पाउन सकेको छैन। मैले खुबै चाख लिएर बुझ्ने कोसिस गरेँ, तर पनि सकिनँ। उक्त दलका नेताहरूले यसमा खुबै रस्साकसी गरेको देखिन्छ, तर आमनागरिकलाई बुझाउने प्रयत्न गरेको देखित्र। कसैले बुझाइदिए म अनुगृहीत हुने थिएँ।
आदित्यमान श्रेष्ठ ७ श्रावण २०७६ मंगलबार १० मिनेट पाठ
नेपालले चाहेको संरक्षक राजा हो, सक्रिय होइन। नेपालमा राजतन्त्र अन्त्यराजाको सक्रियताका कारण भएको हो। सक्रियता राम्रो हो तर खतरनाक पनि हो। असफल सक्रियताले विनाश ल्याउँछ। २०६३ सालमा भएको त्यही हो। १२ वर्षसम्म गणतन्त्रको चहलपहलपछि नेपाली नागरिक राजसंस्थाको खोजीमा छन्। नेपालमा राजतन्त्रको बहिर्गमन जनताको इच्छाअनुसार भएको थिएन।
आदित्यमान श्रेष्ठ ५ असार २०७६ बिहीबार ११ मिनेट पाठ
नेपालको संविधानमा धेरै जाली प्रावधान पाइएका छन्। जाली भन्नाले जे लेखिएको छ सो स्पष्ट छैन। जसले जसरी त्यसको माने लगाए पनि हुन्छ।
आदित्यमान श्रेष्ठ १ जेष्ठ २०७६ बुधबार १२ मिनेट पाठ
आदित्यमान श्रेष्ठका अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्